Zvinhu Most Unique Kuitira In Amsterdam | Save A Train
musha > Travel Europe > Zvinhu Most Unique Kuitira In Amsterdam
Ungave uri kushanyira Amsterdam kokutanga kana kudzoka kuongorora Vakamupfekedza migero asi zvakare, uchada kuziva pamusoro zvikuru yakasiyana kuita muAmsterdam! Kana uri akagadzirira kutsvaka adventures mhiri Damrak avhenyu muAmsterdam, Pamazita ichi achabudirira kupukunyuka wako zvechokwadi mashiripiti!
Zvinhu Most Unique To kuita In Amsterdam: Nakidzwa High Tea In Muduku House In Amsterdam
Chii chingava vanokwezva uye zvikuru akasiyana pane kuva Afternoon Tea mu Amsterdams Muduku House? Ehe, ichi zvachose anofambirana zvikuru yakasiyana kuita muAmsterdam bhiri! Izvi imba duku imwe muAmsterdam dangwe munharaunda iri chete 2 mamita paupamhi. Muridzi akafemera muupenyu hutsva here kupinda tsaru pfuma: imba kamwe raitenda imwe mhuri shanu! Sezvisingadaviriki sezvo zvakanga, kuti ndiye chete imwe nyaya kuti uchawana iyi yakanaka tearoom.
Uriri rokutanga unodziya zvishoma chitoro tii, apo Mapuriro wechipiri newechitatu vakagadzirira kugamuchira kuti imwe tii akandipa fairytale. Kune nzira dzakawanda mangwanani, brunch, yakakwirira tii, uye kunyange masikati. Ndakanga kaviri mu Muduku House: kamwe kwenguva dzinofadza zvemangwanani iyo ndaiva awa yemanheru (kuti akanga asina yakanakisisa zuva rangu), uye mumwe chaizvo ichangopfuura kuti Afternoon Tea nomunwe sandwiches, siyana pizza matatu, uye scones yainaka kuti kana hondo yedu nyasha aida kutora chinhu kure nesu, isu haana kuzeza. The Afternoon Tea takasarudza akatemerwa mutengo pa 25 EUR pamunhu, apo High Tea iri 35 EUR.
Zvinhu Most Unique To kuita In Amsterdam: Ongorora The ZISO Filmmuseum
Of itsvedze zvose muzvivako ano muAmsterdam, ndiyo ZISO Filmmuseum inopfuura. With kwayo dzakanaka, mitsetse inopenya chena Munotatamura achitevedza River IJ pakatarisana chiteshi chechitima. The ZISO zvechokwadi pamusoro zvikuru nemamwe zvinhu zvokuita muAmsterdam pryslys. Its kukoshesa sinema, pamwe sefa vanoverengeka kupa zvakawanda chitendero uye Classic mafirimu. Pane, zvisinei, uyewo pfupi akasiyana Kunstausstellungen uye mabasa kuvana, ndinoiitawo chaizvo nemicheka maonero shure kurutivi peguta. Also zvakavanzika kure pano, uye vanoonekwa zvachose, chinhu cinematic husiri nyore kuwana mafirimu kukohwa Jean Desmet, izvo ndeyemunguva kusvikira 1907. Tora kwemasikati pano, wo: ari Datenroku bhaa ndiko zvazvingava chokutanga.
Valenza kuna Amsterdam Zvitima
YokuHannover kuna Amsterdam Zvitima
Bielefeld kuna Amsterdam Zvitima
Discover The Museum Of Bags And muzvikwama
Mapuriro matatu zvose zvenhaka uye ano zvikwama, muzvikwama uye wallets kuti Tassenmuseum Hendrikje somumwe Amsterdam vakawanda kujairika uye hunokwezva zvinokwezva. Immaculately anounzwa ari muimba yekare uye akanaka, pfungwa huru vanosanganisira Art Nouveau uye Art deco zvidimbu, munhu wose cabinet kuti mashoma uye 1950s nemavara zvikwama akagadzirwa zvakaoma epurasitiki ane chinyakare muchimiro Perspex uye (tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira dubious) mazambiringa zvikwama yaigadzirwa mhuka. Kwekanguva kuratidzira kubva panguva mabhegi uye muzvikwama vakakomberedza kunze muunganidzwa.
Essen kuna Amsterdam Zvitima
Düsseldorf kuna Amsterdam Zvitima
Kana chimwe chezvinhu rakasiyana zvinhu zvokuita muAmsterdam inosanganisira ini kusvika kupuruzira imwe -yevedza mhuka, ipapo ini verenga mu! Enda mberi uye kushanyira yakakurumbira zvikuru catboat! Hongu, iwe verenga zvakanaka kuti! Kunyange katsi yemanyorero kudzivisa mvura zvodii, ari felines kana Poezenboot, sokuti zvakakwana kumba kwavo zvinoyangarara tsvene. Zvinonzi mhuka tsvene kuyangarara pamusoro canal Amsterdam. Rakavakwa Henriette Van Weelde mu 1966 sezvo mumusha rakarasika, sick, uye akasiyiwa felines, uye kubva akura kuva pamutemo nerudo.
The muigwa rinokwana kusvika 50 katsi pakarepo, 14 zvacho zvachose vagari. Vashanyi Human unobvumirwa ari mudziyo uyewo. Vakawanda vanouya kusarudza katsi kuitwa, but tourists are also welcome to drop in and scratch a kitty behind the ears.
Sezvo iri rudo, igwa tsvene inoramba yerera nemhaka mipiro kusiiwa Vashanyi. Mari yose vanomutswa anoenda akananga kubatsira sezvo vazhinji Amsterdam katsi sezvinobvira. The Cat Boat Foundation kubhadhara neutering kuti katsi vane vanatenzi haagoni kuwana wemhuka hanya, uyewo ainge arasika. Vazvipiri vatarisire katsi, vamwe vacho vanogamuchirwa Vashanyi. The katsi inofungidzirwa kururamisa kuupenyu panyika zvakakwana zvakanaka mudzimba dzavo itsva.
Aachen kuna Amsterdam Zvitima
Koblenz kuna Amsterdam Zvitima
MuFrankfurt kuna Amsterdam Zvitima
Enda Plastic Fishing Munguva Yakasiyana Tour Of Amsterdams Canals
kuenda epurasitiki hove Amsterdam migero chimwe chezvinhu rakasiyana zvinhu zvokuita muAmsterdam kuti chokwadi! Uye regai ndikuudzei, zviri chaizvoizvo zvinoita zvakafanana. An zvakatipoteredza noushamwari chirongwa aiwanzopiwa wokushanda pamwe touristic webasa Plastic Whale, ari 2 awa chikepe rwendo zvechokwadi Anorwira pamusoro zvose kunonakidza uye wakajeka nzvimbo. Kamwe iwe vanozopinda mugwa, Unowana mambure okubatisa hove yako, uye kure iwe uende!
The yakanakisisa Chikamu zvichida kuti vamwe chikepe Tours nechikepe kare maererano akafanorongerwa nzira, unokwanisa kuenda chero iwe kusvibisa chidimbu epurasitiki. It turns into a competitive I Spy game where everyone is super invested in finding even the smallest bits of plastic bags. A pakupemberera chaiye kunoitika apo mumwe ikaona nehombodo pedo kurutivi Canal. Sezvo mukuru anotungamirira ngarava kuti aenderane pakati chakasungirirwa zvikepe, iwe angled maoko ako uye achipembererwa hove wemhirizhonga kunze! Gadzirira kukurukura weirdest hove zuva uyewo kuseka uye chisungo pamwe nevamwe vatakurwi.
Ndinofunga kuti chiitiko ichi zvachose unokosha wenyu chinguva, uye inopa kujairika nzira kuwana Amsterdam migero. Iwe kuchaita zvakawanda pasina kuwana vaneta, uye kamwe chete rwokuparidza riri pamusoro, iwe uchava vobuda muchikepe nepfungwa kubudirira uyewo. Nezvose chete 25 EUR.
Osnabruck kuna Amsterdam Zvitima
MuLübeck kuna Amsterdam Zvitima
Bremerhaven kuna Amsterdam Zvitima
Kiel kuna Amsterdam Zvitima
Kana wakambonetseka kuti zvakaita kurarama rimwe Amsterdams houseboats, ndiwo mukana wako kutsvaka. On yedu pamazita zvikuru nedzimwe kuita muAmsterdam, unogona kuita chete kuti! Varidzi vane ushamwari uye avhura yavo Classic muigwa, iyo yakatanga kufamba muna 1914 somunhu chitakuriso kuti jecha uye mavhu asati mudzoke ari Kuma1960. Visitors vanogona kugunzva nzira dzavo kuburikidza unodziya nzvimbo mupenyu, apo tsama tsananguro plaques kupa yakaderera pasi muigwa upenyu. Varidzi havasi voga; zvinenge 3,000 ngarava uye houseboats vari plugged kupinda Amsterdams gasi uye magetsi network. Kuda kuziva kugutsikana, you can stroll along the street to an excellent dining establishment, Restaurant Ostrich.
Kassel kuna Amsterdam Zvitima
Mannheim kuna Amsterdam Zvitima
Fulda kuna Amsterdam Zvitima
Heidelberg kuna Amsterdam Zvitima
Zvinhu Most Unique To kuita In Amsterdam: Tora An Audio Zvave Tuschinski Theater
Discover nhoroondo shure dzinokatyamadza Tuschinski Theater. Zvino nhengo sinema, ari Theater musi Reguliersbreestraat ndiyo chikamu Pathe boka. The nedzimwe France ndiyo kongiri ounyanzvi deco uye uri Nouveau. Created musi Tuschinskis basa parutivi mapurani Hijman Luis de Jong. Asi sezvo vakanaka sezvo France ndiyo, mabhaisikopu chikuru imba iri yemitambo chaiyo uye hapana zvikuru sezvo inofadza sezvo vachiona yaanofarira firimu iri dzvuku vherevheti cheya.
Yemitambo inopa daily Audio Tours kuti kutanga pakati 09:30 uye 11:30. Zviratidzwa inowanika vose Chirungu uye Dutch. Rinotora 45 maminitsi uye mari 10 EUR rinosanganisira kapu yetii kana kofi. Anotungamirirwa rwendo anowanikwawo mapoka makuru kutanga kubva 15 vanhu. Kubhuka, kutumira email kuti rondleidingen.tuschinski@pathe.nl.
Kana uchida kunakidzwa yemitambo ambiance, unogona kutora Kutarira vakaronga bhaisikopo screenings. Imomo uchawana zvimwe zvesimba pamusoro Pathe Website. Kuti tive Kusarura iri yakanaka theatre nzvimbo, Tarisa mafirimu Kukuru Hall. nguva dziri kure, hapana Concerts mhenyu pamwe.
Mushori kuna Amsterdam Zvitima
Rinonzi Ghent kuna Amsterdam Zvitima
Zvinhu Most Unique Kuitira In Amsterdam: Enda On An Kutizira Room Adventure In Rijksmuseum
Muzhizha pamusoro 2018 Rijksmuseum vatanga zvairehwa kuva shoma yechirimo chinokosha. Zvino yava rimwe rakasiyana Kutiza mutambo experinience uye pane yatakanyora pasi akawanda zvinhu nedzimwe kuita muAmsterdam uye kunoitika Amsterdams yakakurumbira miziyamu. zvisinei, zvinoita sokuti pachapera kubudirira, mukutsvaga ari pano kugara. The Chiitiko ndedzoupenyu norupo 1.5 maawa uye chaizvoizvo racho rose ringakweva iwe mumhepo. Iwe tasked pamwe nokupora nzira yemaitiro chakabiwa kubva rechi18 rinonzi remakore kubudikidza Italian muroyi uye alchemist Alessandro Cagliostro.
Liege kuna Amsterdam Zvitima
Leuven kuna Amsterdam Zvitima
Bruges kuna Amsterdam Zvitima
Oostende kuna Amsterdam Zvitima
The Worlds Only Museum vakazvipira The Wonders Of Fluorescence
Amsterdam yakakurumbira Anne Frank House ari pedyo chaizvo ichi miziyamu duku vakazvipira zvikuru Psychedelic nyaya ine chikonzero chikuru nei chimwe chezvinhu rakasiyana zvinhu zvokuita muAmsterdam!
Anazvo uye wakashanda kubudikidza hachi akadanidzira mifananidzo Nick Padalino. Electric Ladyland ndechimwe pamusoro zvikuru nemamwe zvinhu zvokuita muAmsterdam pryslys. Inogona kuwanika pasi saizvozvo ainzi mumugwagwa pamwero Art Gallery, Electric Lady. Electric Ladyland ndiyo nyika yokutanga (uye sokuti chete) museum focusing solely on the magic of fluorescent light.
Genk kuna Amsterdam Zvitima
Hasselt kuna Amsterdam Zvitima
Namur kuna Amsterdam Zvitima
Kortrijk kuna Amsterdam Zvitima
Wakagadzirira kuenda parwendo shoma vaifamba, asi o saka zvikuru? Kubata motokari pamwe Save A Train! No zvakavanzika mari, chete zororo!
Unoda embed yedu Blog romukova “Zvinhu Most Unique Kuitira In Amsterdam” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-unique-things-amsterdam/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)